Qalalaasaha Tigray:- Qaramada Midoobey oo ka hadashay in ‘ciidamo Soomaali ah ay ka qeybgaleen dagaalka Tigray’ | Gaaroodi News
Qalalaasaha Tigray:- Qaramada Midoobey oo ka hadashay in ‘ciidamo Soomaali ah ay ka qeybgaleen dagaalka Tigray’
June 8, 2021 | Published by: Tifaaftiraha
Warbixin ka soo baxday Hay’adda Xuquuqda Addanaha u qaabilsan Qaramada Midoobey ayaa lagu sheegay in ciidamo ka socday Soomaaliya oo tababar ku qaadanayay saldhig militari oo ku yaalla Eritrea in ay ka qeyb qaateen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya.
Dowladda fedaraalka ee Soomaaliya ayaa horey u beenisay warar la isla dhex marayay oo ku saabsanaa in ciidamo Soomaali ah oo tababar u joogay Eretrea ay ka qeyb qaateen dagaalkii dhawaan ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga Itobiya.
Warbixinta Qaramada Midoobey waxaa sidoo kale ku xusan inay heleen warar ku aadan in xafiiska arrimaha dibadda iyo guddiga gaashaandhigga ee baarlamaanka Soomaaliya ay ugu baaqeen madaxweynaha in xaqiiqo loo diro Eritrea si loo baaro in ciidamo Soomaali ay ka dagaallameen gobolka Tigray.
“Qaramada Midoobey waxaa lagu wargeliyay in xafiiska arrimaha dibadda iyo guddiga baarlamaanka u qaabisan arrimaha gaashaandhigga in madaxweynaha ay ugu baaqeen in guddi xaqiiqo raadin ah loo diro Asmara, si ay baaritaan ay ugu sameeyaan arrinta,” ayaa lagu yiri warbixinta.
“Waxaan dalbaneynaa in waaliddiinta jawaab la siiyo, waxaan dalbaneynaa in wiilashii Soomaaliyeed iyo gabdhihii loo qaaday dalka Eritrea ay dowladda ka jawaabto. Laakiin hadda waxaa soo baxday warbixin caalami ah oo arrintii ka markhaati kaceysa”. Dagaalkii ka dhacay Tigray
Hadalkii horey ay dowladda Soomaaliya uga tiri arrintan
Dowladda fedaraalka ee Soomaliya ayaa bishii January beenisay in ciidamo Soomaali ah oo tababar u joogay Eritrea ay ka qeyb qaateen dagaalkii ka dhacay Tigray.
Wasiirka warfaafinta ee dowladda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo xilliggaas BBC la hadlay ayaa sheegay in aysan gabi ahaanba jirin ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya oo ka dagaalamay gobolka Tigrey.
“Ma jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka dagaalamay waqooyiga Itoobiya iyo gobolka Togrey, sabab ay u dhacda-na ma jirto, cid naga codsatay na ma jirto,,” ayuu yiri wasiirka warfaafinta.
Mr Dubbe ayaa warar been abuu ah ku tilmaamay in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomalaiya ay ka dagaalameen gobolka Tigre, islamarkana la doonayo sida uu hadalka u dhigay in lagu wiiqo awoodda ciidamada Soomaaliya.
“Waa warar borobagaandho oo markii la arkay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay dhismayaan oo xoogeysnayaan oo ay isu taagayaan inay ka adkaadaan amniga ayaa la doonayaa in lagu qalqal galiyo hooyooyiinka iyo maatida,,” ayuu intaa ku daray.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in tacaddiyo ka baxsan xuquuqda aadanaha laga geystay gobolka Tigray intii ay dagallada socdeen, waxaana kamid ah in weerar loo geystay qaxooti Eritrean oo ku sugnaa gobolka , falala afduub ah iyo dhac loo geystay dad rayid ah.
Xoghayaha guud ee Qaramada Midobay Antonio Gutteres ayaa sheegay in qeybo kamid ah gobolka Tigray ee waqooyiga dalka Itoobiya ay halis ugu jiraan cunto yaraan ba’an.
Wuxuu ku baaqay in la fududeeyo adeegyada gargaarka biniaadanimo ee la gaarsiiyo halkaasi isla markaana la kordhiyo lacagaha la yaboohayo,
Dadka ku nool Waqooyiga gobolkaasi Tigray ayaa BBC-da u sheegay inay qarka u saaranyihiin dhimasho gaajo darteed